မီးဖိုချောင်ထဲ မှာ ပဲ အိုးကိုင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ဆို တဲ့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်း – Let Pan Daily
မီးဖိုချောင်ထဲ မှာ ပဲ အိုးကိုင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး ဆို တဲ့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်း
မိုင်းမိုင်ဆိုင်းကတော့ မြန်မာ အိုင်ဒေါသီချင်း ဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာနဲ့ ဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းလာသူတစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလောကိုဗစ်ကာလ ပွဲတွေရပ်နားထားချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက်ရာ ကြက်ကင်နဲ့ အခြားအကင်များကို အွန်လိုင်းကတဆင့်ရောင်းချနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလ အတွင်း မွေးရပ်မြေ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စတင်ရောင်း ခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ လိုက်လံပို့ဆောင်ကာ ရောင်းချနေပါတယ်။ အားပေးကြမ်းလွန်းတဲ့စားသုံးသူတွေကြောင့် ပိတ်ရက်မရှိ ရောင်းနေရသလို အချိန်ပြည့်မီးဖိုချောင်ထဲက မထွက်ရအောင် ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သီချင်း အသစ်တွေကိုလည်း စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် စတူဒီယိုက ပုံရိပ်တချို့နဲ့ အတူ သတင်းကောင်းလေးပေးခဲ့ပါတယ်။
” Something is coming very soon!! အမိုက်စား တစ်ခု မကြာခင်လာမယ်နော်…. မီးဖိုချောင်ထဲ ဟင်းအိုးပဲ ကိုင်နေတာမဟုတ်ရပါပုနော်… Studio ထဲမိုက်လည်းကိုင်‌ နေပါတယ်လို့” ဆိုပြီးရေးသားကာ ပရိသတ်တွေအတွက် အမိုက်စားတစ်ခုစီစဉ်နေကြောင်း မျှဝေလာပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… မိုင်းမိုင်ဆိုင်းကတော့ မီးဖိုထဲမှာ ဟင်းအိုးလည်း ကိုင်နေသလို သီချင်း အသစ်စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း စတူဒီယိုသွားနေပါပြီတဲ့နော်။
မီးဖိုခြောငျထဲ မှာ ပဲ အိုးကိုငျနတော မဟုတျပါဘူး ဆို တဲ့ မိုငျးမိုငျဆိုငျး
မိုငျးမိုငျဆိုငျးကတော့ မွနျမာ အိုငျဒေါသီခငျြး ဆိုပွိုငျပှဲကနတေဆငျ့ ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာနဲ့ ဂီတခရီးလမျးကို လြှောကျလှမျးလာသူတဈယောကျပါ။ လတျတလောကိုဗဈကာလ ပှဲတှရေပျနားထားခြိနျမှာတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျလကျရာ ကွကျကငျနဲ့ အခွားအကငျမြားကို အှနျလိုငျးကတဆငျ့ရောငျးခနြတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကိုဗဈကာလ အတှငျး မှေးရပျမွေ ကခငျြပွညျနယျမှာ စတငျရောငျး ခဲ့ပမေယျ့ အခုဆိုရငျတော့ ရနျကုနျမှာ လိုကျလံပို့ဆောငျကာ ရောငျးခနြပေါတယျ။ အားပေးကွမျးလှနျးတဲ့စားသုံးသူတှကွေောငျ့ ပိတျရကျမရှိ ရောငျးနရေသလို အခြိနျပွညျ့မီးဖိုခြောငျထဲက မထှကျရအောငျ ကိုယျတိုငျလုပျနရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ သီခငျြး အသဈတှကေိုလညျး စောငျ့မြှျောနတေဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ စတူဒီယိုက ပုံရိပျတခြို့နဲ့ အတူ သတငျးကောငျးလေးပေးခဲ့ပါတယျ။
” Something is coming very soon!! အမိုကျစား တဈခု မကွာခငျလာမယျနျော…. မီးဖိုခြောငျထဲ ဟငျးအိုးပဲ ကိုငျနတောမဟုတျရပါပုနျော… Studio ထဲမိုကျလညျးကိုငျ‌ နပေါတယျလို့” ဆိုပွီးရေးသားကာ ပရိသတျတှအေတှကျ အမိုကျစားတဈခုစီစဉျနကွေောငျး မြှဝလောပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ… မိုငျးမိုငျဆိုငျးကတော့ မီးဖိုထဲမှာ ဟငျးအိုးလညျး ကိုငျနသေလို သီခငျြး အသဈစောငျ့မြှျောနတေဲ့ ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး စတူဒီယိုသှားနပေါပွီတဲ့နျော။
ဖွူဖှေးနတေဲ့ အလှတရားတှေ ပျေါလှငျအောငျ မိလှနျးနေ တဲ့ ဖူးပှငျ့သခငျ ရဲ့ ပုံရိပျမြား